Sawirro: Cariiri ka jira isbitaalka Godinlabe - Ceelhuur Online
Home > Caafimaadka > Sawirro: Cariiri ka jira isbitaalka Godinlabe
Sawirro: Cariiri ka jira isbitaalka Godinlabe
April 22, 2017 admin697
Waa Isbitaalka guud ee godinlabe oo bukaanada qaar lajifiyay banaanka
Xili an howlo shaqo u tagay waxaa jifay 20 ruux oo qaba cuduro kala duwan sida Caruur la il daran jadeecada iyo shuban biyoodka bukaanada jiifa hospital ka waxay isugu jiraan kuwo degan magaalada iyo qaar ka yimid degaano fog fog.
Marka la fiirsho Tiradan bukaanadaan maha tiro sidaas ugu badan balse nasiib daro.
Caqabadaha hada ka taagan hospitalka ayaa ah ciriiri ka jira dhismihiisa Waxuuna leeyahay 1qol oo bukaan jif ah sida sawirada in kaga muuqatana waxaa dadka qaar jiifan banaanka ayagoo la jifiyaay dhismooyin macmil ah laga dhisay banaanka hospitalka dhismooyinkan ayaana Celin karin roobka iyo qoraxda .
Waxaa intaa dheer in ay aad u yar yihiin sariiha lagu talagaley bukaanada 6 sariir oo kaliya ayana taala gudahaan hospitalka sida ay ii xaqiijiyen howdaneeda cafimaadka.
Godinlabe District hospital ayaa markii horaba ku yimid abaabulka bulshada degaanka waxaana muqata inaysan hada socon dadaalo lagu balaarinayo xili ay adeegiisa cafimad ku xiran yihiin bulshada Godinlabe iyo deegaano ad u farabadan.
Wariye Cali Yare Aadan
Dowladda oo ku dhawaaqday xilliga la galayo imtixaanka Dugsiyada Sare
Maxkamadda Ciidamada oo go’aan kasoo saartay kiiskii Ina Calool Geel